गनेस पौडेलको ‘पैताला’लाई पोखरामा कसले के भने ? – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » गनेस पौडेलको ‘पैताला’लाई पोखरामा कसले के भने ?
गनेस पौडेलको ‘पैताला’लाई पोखरामा कसले के भने ?
पोखरा, १५ जेठ । लेखक गनेस पौडेलको पहिलो उपन्यास पैतालाको सोमबार पोखरामा विमोचन भएको छ । ¥याण्डम रिडर्स सोसाइटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त श्रेष्ठ र साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठले सँयुक्त रुपमा उपन्यासको विमोचन गरेका थिए ।
उपन्यास विमोचन गर्दै प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तले लामो समय यता पोखरामा सुस्त रहेको आख्यान लेखनलाई पैतालाले पूर्ती गरेको बताए । त्यसैमाथि मुलधारे विषयभन्दा फरक मानिने तान्त्रिक आख्यान लेख्ने आँट गरेको भन्दै उनले लेखक पौडेललाई शुभकामना दिए । ‘गनेस पौडेलको पहिलो कृति भएपनि उनको प्रतिभामाथि मलाई पूर्ण विश्वास छ । यो उपन्यास निकै सुन्दर हुनुपर्छ ।’ सरुभक्तले भने–‘र, गनेस पौडेलको पैताला भन्ने उपन्यासले पोखराको आख्यान लेखनलाई पनि अझै सक्रिय बनाउँदै लैजानेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
त्यस्तै साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठले आख्यानकार गनेस पौडेल समकालिन लेखकहरुको तुलनामा फरक शैलीको भएको बताए । ‘पहिलो कृति नै तन्त्र सम्बन्धि लेखेर गनेस पौडेलले खतरा मोलेका छन् । र, यस्तो खाले खतरा मोल्ने खुबी जो कोहि लेखकसँग हुँदैन ।’ उनले भने–‘गनेसको यो आँटलाई सलाम गर्दै म उनलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु ।’
त्यसैगरि लेखक कुमार नगरकोटीले गनेस पौडेलले तान्त्रिक उपन्यास लेखेर निकै महत्वपूर्ण कदम उठाएको बताए । ‘यो जो कोहिले आँट गर्न सक्ने विषय नै होईन । तर गनेस पौडेलले यसो गर्न सक्छन् र यसमा आफुलाई अब्बल देखाउन सक्छन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो । र, त्यो भयो पनि ।’ नगरकोटीले भने ।
उपन्यासको प्रकाशक संस्था बुक हिलका संचालक भूपेन्द्र खड्काले पैताला गनेस पौडेलको पहिलो कृति हो भन्ने कुरा नै पाठकको लागि अपत्यारिलो हुने बताए । ‘गनेस पौडेल जस्ता लेखकहरुको जन्म भयो भने नेपाली आख्यानको बजार अझै धेरै माथि जान सक्छ ।’ उनले भने–‘यस्ता गज्जबका लेखकले प्रकाशकको रुपमा हामीलाई पत्याएर गुन लगाउनुभएको छ ।’
लेखक पौडेलका बालसखा तथा संचारकर्मी महेश भण्डारीले पौडेलको पहिलो आख्यानको पाण्डुलिपि पढेर नै आफु उनीप्रति अझै बढि प्रभावित भएको बताए । ‘लेखकमा अध्ययन, अनुभव, कल्पनाशिलता र भ्रमणको प्रचुर मात्रा भएको मैले नजिकबाट देखेको छु, भोगेको छु । यी चार चिज सफलताका लागि चाहिने तत्वहरु हुन् ।’ उनले भने–‘यी सबै कुराहरुको मिश्रण उनले आफ्नो पहिलो उपन्यासमा निकै गज्जबसँग गरेका छन् ।’
लेखक गनेस पौडेलले तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रको उपयोगले मात्रै संसारका हरेक कुराहरु संचालनमा आउने भएकोले आफुले त्यसैसँग सम्बन्धित विषयलाई उपन्यासमा समावेश गरेको बताए । ‘कतिलाई तन्त्रमन्त्र भन्नासाथ अन्धविश्वास हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर त्यसो होईन । संसारको सबैभन्दा पहिलो विज्ञान नै तन्त्र विज्ञान हो । र, यो शास्वत सत्य छ ।’ उनले भने । उनले पाठकहरुलाई किताब नपढि हल्का रुपमा उपन्यासको बारेमा टिप्पणी नगरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उदिपराज ढुंगानाले उपन्यासको बारेमा टिप्पणी गरेका थिए । उनले उपन्यासको लेखन शैली र विषयवस्तु केहि फरक भएको हुँदा पाठकलाई पढ्न मज्जा आउने बताए । त्यस्तै केहि पाठकका लागि उपन्यास बुझ्न गाह«ो हुन सक्ने उनले आँकलन गरेका थिए ।
यो उपन्यासको प्रकाशन संस्था बुक हिलले काठमाण्डौमा शनिबार पुस्तकको विमोचन गरिसकेको छ । लेखक गनेस पौडेलको गृहनगर पोखरा भएकोले आयोजक ¥याण्डम रिडर्स सोसाइटीले यहाँ पनि विमोचनको कार्यक्रम जुराएको हो । ¥याण्डम रिडर्स सोसाइटीका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमलाई केशवशरण लामिछानेले संचालन गरेका थिए ।